Blesbok - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
IBlesbok (Damaliscus pygargus phillipsi)
Ngokwenyama, iinkunzi zeegusha kunye neebhokhwe zifana ngqo. Ubunzima bazo bunokuba luninzi lwe-85 kg. Impawu yeBlesbok ngumlilo omhlophe obalaseleyo ebusweni kunye nomgca obomvu obunqamlezayo ohlula lo mlilo ngaphezu kwamehlo. Umbala womzimba unobumba obomvu ngesikhephe esiluhlaza kumqolo, kwaye i-rump ibe nomthunzi omnyama. Imilenze ibomvu kunye nenqaku elimhlophe emva kwephambili kwimilenze yangaphambili. Imilenze ephantsi imhlophe. Zibini zentshontsho zithwala iiimpondo, zazingca malunga nantoni. Iimpondo zezilwanyana zincinci kakhulu.
I-Blesbok yintlobo zeentlobo zezilwanyana, ezibonisa ukukhetha ingca emfutshane, kwaye ngokukhethekileyo zikhangela ungca enibushushu obubonakalayo emva kokutshisa.
I-Blesbok ngumvelisi wonyaka. Ukubetha kwenzeka ngoMatshi ukuya kuMeyi. Ukuzalwa kwentengo ngoNovemba noDisemba emva kwexesha lokunyuka kweentsuku eziyi-240. Amabhinqa abeleka amathole angatshatanga.
I-Blesbok isondelelene kakhulu neBonbobok. Ngokomlando, ukunikezelwa kwezi ntlobo ezimbini akuzange kuphelelwe. Ukudibanisa kumazwe apho zombini iipropesi zikhoyo ngoku zibhalwe. Indawo yokuhlala ekhethiweyo ivuliwe ngamanzi.
Ukuba nobudlelwane obusondeleyo neBonbobo bekukho ukudibanisa okukhulu phakathi kwezilwanyana ukuya kwinqanaba elithile ukuba inani elichanekileyo lokuhlanjululwa kwezinto ezihlambulukileyo zintlobo nganye zifanelekile. Igama livela kwigama lesiDatshi ngokutsha, elibhekisela kumhlophe ebunzini.